Isisombululo soPholiso lweGel Patch-eSebenzayo kuSombululo
Ukupholisa umzimba kunye ne-coid compress physiotherapy.
Iqondo elingaphezulu kwe-38 ℃, umbala utshintsha ukusuka emfusa ukuya kupinki.
Iqondo elingaphantsi kwe-38 ℃, umbala utshintsha ukusuka kupinki ukuya emfusa.
Kuphela kunyango lwezihlunu ezithambileyo ezivaliweyo.
Isiphumo sokupholisa sihlala kwangoko ukuya kwiiyure eziyi-8.
Kulula ukufaka nokususa kwaye akusayi kushiya nayiphi na intsalela encangathi.
Ubumnene kulusu (Iphepha le-gel elinobuthathaka / iHydrophilic Polymer esetyenzisiweyo).
Igama: Ukupholisa uGel Patch
Ubukhulu: 50mm * 120mm
Iphakheji: 4pcs / ibhokisi
Inkcazo yeziyobisi:Yenziwe ngelaphu non-ephothiweyo umva naphakathi, gel umaleko kunye PE zokuthintela umboniso. Izinto eziphambili zibandakanya i-hydrogel, amanzi ahlambulukileyo, i-peppermint, i-pigment. Imveliso ayibandakanyi izongezo zonyango ezinxulumene ne-pharmacology, i-immunology okanye i-mtabolism.
Ukungqinelana: Nceda unqande imveliso ukuze isetyenziselwe i-eys okanye inxeba, i-eczema, i-dermatitis kunye nezinye iinxalenye zesikhumba.
Ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela
Tyhila umboniso obonakalayo kunye nokuncamathela kwicala lehydrogel ebunzi, entanyeni, etempileni okanye kwezinye iindawo ezifuna ukupholisa kunye nokubanda okubandayo. Inokunqunyulwa kubungakanani obufanelekileyo obugxininisa kwimfuno.
Musa ukunamathela ezinweleni. Ukuba kukho ukufuma kulusu, yicoce emva koko uyisebenzise. Sebenzisa icwecwe elinye ngexesha. Gwema ukusetyenziswa okuphindaphindiweyo ukuze ungachaphazeli i-viscosity kunye nomsebenzi.
● Kuphephe ukutya. Abantwana bayacetyiswa ukuba bayisebenzise phantsi kweliso lomntu omdala.
● Le mveliso ingezizo iziyobisi isetyenziselwa ukupholisa okungabancedani. Ukuba ifiva ephezulu ayibuyi mva, nceda uye esibhedlele. Sebenzisa imveliso phantsi kwengcebiso kagqirha.
● Gcina amaphepha angasetyenziswanga engxoweni, evulekileyo aze asonge kabini kwimigca eqinileyo.
● Gcina kwindawo eyomileyo epholileyo, kude nelanga.
● Gcina ukufikelela ebantwaneni. Ukuba uginyiwe, fumana uncedo lwezonyango okanye uqhagamshelane nodokotela ngokukhawuleza
Ixesha elifanelekileyo: Iminyaka emithathu
Egqithileyo I-36 Acne Pimple Patches-eSebenzayo yokuTyabeka isisombululo
Okulandelayo: Isisombululo seswekile yezeMpilo-yePatch-eSebenzayo yokuTyabeka
Ukupholisa usana kwiPad
Iimveliso zokupholisa umzimba
Ukupholisa iGel Pad
Iipakethe zokupholisa zomzimba
Ukupholisa iPad yomzimba
Fever Ukupholisa iPatch